Fa raha sanatria moa ny ratsy sy ny tsy izy no nofidian'ny Malagasy? | Hevitra MPANOHARIANA
ny ahy soa misy saka efatra ato antrano ka manjary ataony kilalao ny hazo noely (plastika an, mila arovana ny hazo) dia tsy mamoaka hazo noely intsony aho fa ny rindrina sy ny fanaka tsy takatry ny saka no fenoina haingony. Io aza zao fa efa izy indray no manaingo tena @ ilay haingon-databatra, tssss
Nampidirin'i ikalamako @ 23:21, 2008-12-05 [Valio]
Tena mba variana koa aho amin'ny zavatra vita sinoa, hoy ny ao an-trano izay hoe "indramina" fontsiny ireny ! Fa matetika ilay izy mora dia iny no takatry ny volan'ny be sy ny maro. Fa variana indray aho @ ity hoe asiany fofona friperie ilay lamba fitafy mba mitovy amin'ny avy aty Europe hono dia ...
Ilay resaka sapin/père noêl sy ny fivavahana, tsy misy ifandraisany tokoa ireo zvt 2 ireo. Fa ny mahatonga ny sapin any ampiangonana dia toy ny haingo-trano rehetra, tsy misy mivavaka @ iny akory raha mbola fiangonana kristianina, ary tsy misy père noely tonga akory raha mbola fiangonana manaraka an'i Jesosy Kristy. Fa itanao teraka tany amin'ny tany mangatsiaka i Jesosy, ary io kintana eo @ tendron'ny sapin io kosa mampahatsiahy ilay kintana nitarika ireo magy nankany an-tranon'omby, kintana manambara ny nahaterahan'ilay Tompo Lehibe. Ataoko fa izay koa no antony.
Nampidirin'i Kdaombaramita @ 08:00, 2008-12-06 [Valio]
Azafady letsy baina (jentilisa) fa tsy vitako hatramin'ny farany ny namaky ilay lahatsoratr'ialahy fa lava be a hihiihhi nefa manana hambara ihany izaho. Mitombo letsy ny mahantra a zava-misy io fa tsy foronina porofo ireo efa omen'ialahy ireo: mifatratra any amin'ny entana sinoa ny ankamaroan'ny olona. Faharoa lasa mivarotra daholo ny ankamaroan'ny olona fa tsy mahita asa tena mahavelona.
Fa tsy manompa ny mpanao asa tanana malagasy ve ialahy raha miteny fa "tsy mampivandravandra ny fahasimban'ny tsenan'ny asa tànana sy vokatra Malagasy" ny vokatra sinoa. Sa kosa ny mifanohitra @ zay no tian-drangahy lazaina hihihihi
Nampidirin'i tebokaefatra @ 13:29, 2008-12-06 [Valio]
Nahoana kosa moa aho baina no hanompa ny mpanao asa tanana malagasy?
Gravy koa izany redirediko izany. mbola be ny tiana hambara fa aleo indray aloha milamina e
Nampidirin'i jentilisa @ 16:15, 2008-12-06 [Valio]
Lalanan'ny tsena angamba no mahatonga ny ol hirona any @ entana sinoa fa tsy dia hoe tsy firarahiana ny vita malagasy akory ee.
Politika tsy mahomby an'ny fanjakana no tena fototry ny tsy fahombiazana @ io...
dadabenoely sy ny karazany: efa ela no tsy nisento @ zany tsony :P
Nampidirin'i simp @ 23:12, 2008-12-06 [Valio]